Maitiro ekuisa PlayStation emulator pane iyo iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuisa PlayStation emulator pane iyo iPhone
Ignacio Sala | | Cydia, iOS 9, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Zvisinei nekuti vashandisi vazhinji vanosimbisa kuti nekusvika kweIOS 9 havachaona kukosha kweJailbreak, kuitira kuisa emulators, Jailbreak ndiyo chete nzira iripo. Kunyange chiri chokwadi kuti emulators emitambo yakare haatipe chiitiko chinoshamisa, kana tikataura nezvemitambo yePlayStation, zvinhu zvinoshanduka uye zvinotinyatsofunga kuti tifunge nezveJailbreak kana kwete. Jailbreak yekupedzisira yakaburitswa naPangu yeIOS 9 yaive 9.0.2, saka parizvino kana usiri mushanduro iyoyo hazvigoneke kuzviita, sezvo mavhiki mashoma apfuura Apple yakamira kusaina vhezheni iyi, uye inongotibvumidza kudzosera iOS 9.1. Kana iwe uine rombo rakanaka uye uchiramba uchinakidzwa neJailbreak, mu iPhone News isu takagadzira yakazara dzidziso yekugona nakidzwa mitambo ye PlayStation pa iPhone.
Isa PlayStation emulator pane iPhone
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuvhura Cydia.
Chechipiri tinokwira kumusoro Fonti> Hora> Wedzera.
Iye zvino isu tinosuma inotevera repo buildbot.libretro.com/repo/cydia uye tinya pa Wedzera sosi.
Pakangowedzerwa repo nyowani, tinya Dzokera kuCydia uye isu takaenda kune Yekutsvaga sarudzo uye isu tinonyora RetroArch
Pazvisarudzo zvese zvinoonekwa, tinya pane RetroArch (iOS 9) uye wozoisa. Maitiro aya anoenderana nekumhanyisa kumhanya kwauinako, nekuti iyi tweak inotora angangoita 60 MB.
Pane imwe yaiswa, tora pa Dzokera kuCydia.
Iye zvino tinodzokera kugirazi rinokudza kuti tiwane imwe tweak uye tinyore Otomatiki SSH uye tinoiisa. Iyi tweak ichatibvumidza kuendesa maROM kune yedu kifaa. Kana isu tinogona kushandisa iFile uye webhu racho basa rekuwedzera.
Kana tangopedza matanho aya, tichave neiyo emulator yakaiswa pane yedu kifaa. Iye zvino isu tinongofanirwa kuimisa. Kune izvi isu tinofanirwa kumhanyisa iyo RetroArch application iyo ichawanikwa pane iyo Springboard.
Kana tangomhanyisa iyo application, isu tinobva tadzvanya paInternet Kugadziridza> Gadziridza GLSL Shaders uye kurodha pasi kunozotanga, izvo zvinotiratidza danho rekuita pazasi kwekona.
Kana maitiro acho apedza, tinya Kwidziridzo Kupfuura, mushure me Gadziridza Dhatabhesi, Gadziridza Autoconfig Profiles, Gadziridza Assets, Gadziridza Core Info Mafaira y Gadziridza Core Kugadziridza. Iyi yekuvandudza maitiro inotora nguva yakareba, nekuda kwehukuru hwezvidzoreso.
Kana yazvino Gadziridza Core Kugadziridza ichangobva kuiswa, rondedzero ine akasiyana emulators anozoratidzwa, isu tinofanirwa kutsvaga uye tinya pa PlayStation (PCSX ReARMed) [Muturikiri] uye kurodha pasi kunotanga.
Kamwe kuisirwa kwese kwese kugadziridza kwapedza, tinya paBack bhatani ka2 kuti udzokere kuchiratidziro chekutanga
Tevere tinoenda ku Takura Core uye sarudza PlayStation (PCSX ReARMed) [Muturikiri]. Zvekare tichadzokera kumenu huru. Iye zvino isu tinongoda kuve neROMs yekuteedzera kuchinhu kuburikidza neSSH kana kuburikidza neiyo iFile webhu saiti. Zviripachena muActualidad iPhone isu hatitsigire humbavha uye hatisi kuzokupa iwe kurodha pasi zvinongedzo, asi uchitsvaga padiki kuGoogle unozviwana zvechokwadi.
Paunenge uchinge wawana maROM emitambo iyo iwe yaunoda kushandisa pane yako iPhone, isu tinobaya yedu iPhone kana iPad kune komputa uye kushandisa, semuenzaniso WinSCP (Windows) kana Cyberduck (Mac). MaROM anofanirwa kuteedzerwa kune / var / mobile / zvinyorwa dhairekitori kuitira kuti iyo RetroAch application igovawana.
Kana tangoteedzera maROM isu tinovhurazve iko kunyorera uye toenda ku Mutoro Wemukati> Sarudza Faira uye tinya pane mutambo watinoda kutamba.
Ndanga ndichiedza akasiyana PlayStation ROMs pane iyo iPhone 6Plus uye hapana akaunza kana diki diki rematambudziko. Uye zvakare, iko kuyerera uye kurodha kumhanya, kunyangwe saizi yeROM, yakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Maitiro ekuisa PlayStation emulator pane iyo iPhone
Jorge chingamu akadaro
Ndeye iOS 9 chete? Iko hakuna imwe ye8.4?
Pindura kuna Jorge chingamu
Mhoro!! Iyo ROM ndiyo mhando yePSP kana PSX? Ndatenda!
Batsira. Ini ndakaisa iyo rom kuburikidza neiyo File web mu var / nhare / zvinyorwa sezvandairodha pasi, zip.
kana uchichiita mutrarch haina kuoneka mudhairekitori iwe yaunoratidza mubhuku. Ndinoitsvaga asi handikwanise kuimhanya. Chii chandiri kutadza?
roms haioneke mauri unoti inofanirwa kuoneka.
uye controllers4all ?? tinogona kuishandisa mukutora zvekare?
tiudze chimwe chinhu! vhidhiyo dzidziso kana chimwe chinhu
Malware inoenderera ichikura paIOS, asi Apple yatove nehurongwa hwekuimisa
Nakidzwa neiyi Star Wars mapikicha e iPhone